Lalatiana Ravololomanana : « Tsy mendrika ny ho filoham-pirenena i Marc Ravalomanana » -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Ravololomanana : « Tsy mendrika ny ho filoham-pirenena i Marc Ravalomanana »
Fanta-poko, fanta-pirenena ny tian-kantongavan’ny Filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim), Marc Ravalomanana, hatramin’ny niverenany an-tanindrazana. Izy ihany rahateo no nanambara tamin’ny nahatongavany teto Madagasikara, teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra fa “tsy mahandry ny fifidianana ho filoham-pirenena 2018 ny tenany”. Mazava avy hatrany izany fa ny hanongam-panjakana amin’ny fomba rehetra no tanjony.
Amin’izao fotoana, dia ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) izay tantanin’ny vadiny, Lalao Ravalomanana, indray no ataon’izy ireo fitaovana hanomanana ny filatsahan-kofidiana amin’ny fifidianana Filoham-pirenena 2018. Araka ny efa fantatra mantsy dia ingahy Marc Ravalomanana ihany no mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana.
Noho izay indrindra, ary koa ny fombafombany sy ny fitondran-tenany hatramin’ny naha Ben’ny tanàna an’i Lalao Ravalomanana, nanambara ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana, omaly, nanoloana ny mpanao gazety fa “tsy mendrika ny hitantana sy ho Filoham-pirenena akory i Marc Ravalomanana”.
Mazava tsara mantsy ny tian’ingahy Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-dia aminy ao amin’ny CUA, fa ny hanomana ny firotsahan-kofidiany. “Amin’ny maha mpanolotsaina azy, ahoana moa no ahafahan’ity Filoha teo aloha ity miteny amin’ny anaran’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny raharaha eo anivony? Izany anefa tena fanaony matetika mihitsy. Tsy azony atao, ary tsy tafiditra amin’ny andraikitra sahaniny akory anefa izany. Tsy misy afa-tsy ireo lefitry ny Ben’ny tanàna ihany no afaka miteny amin’ny anaran’ny Ben’ny tanàna amin’ny raharahan’ny kaominina”, hoy hatrany i Lalatiana Ravololomanana, mpanolotsaina monisipaly.
Notsindrian’ity mpanolotsaina monisipaly ity, fa raha toa ka mitohitohy izao fitondran-tenan’ingahy Marc Ravalomanana izao, dia ho voaenjika amin’ny fisandohan’andraikitra ny tenany atsy ho atsy. “Averiko hatrany fa tsy mendrika ny hitondra sy hitantana firenena akory ingahy Marc Ravalomanana”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.